जेनी कुँवरले ल’खेटी ल’खेटी थु’नेको प्रहरी मिडियामा ! के जेनी अ’र्धपा’गल हुन् ? जेनीको झु’टको पर्दाफास (हेर्नुस् भिडियो)
केही दिन अगाडी पशुपति मन्दिर परिसरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर हाता भित्र नायिका जेनी कुँवरले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अ’पशब्द बोलि अ’श्लिल गा’ली ग’लौच गर्दै ल’खेटी ल’खेटी कोठामा थु’नीदिएकी थिईन् । आज उनै जेनी कुँवरले पुन: उक्त घ’टनामा प्रहरी नै गलत भएको आ’रोप लगाएकी छिन् ।
निर्माणाधीन मन्दिर भित्र पशुपति बिकाश कोषले कामदार बाहेक अरुलाई प्रवेश नि’षेध गरेको छ तर आफ्नो पुर्खाको सम्पति हो भन्दै आफु खुशी भित्र पस्न नपाएपछि जेनी आ’क्रोशित बनेकी थिईन् । बिकाश कोषले निर्माणाधीण मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीलाई बाहिरबाट दर्शन गरि भित्र प्रवेश नि’षेध गरेको छ । मेरो बाउ बाजेले बनाएको मन्दिरमा मलाई नै प्रवेश गर्न नदिने भन्दै आ’क्रोशित बनेकी जेनीले झु’ट माथि झु’ट बोलेकी छिन् ।
किन झु’ट बोलिन त जेनीले ? यस्तो थियो वास्तविकता । प्रहरीलाई गा’लि गर्दै हा’तपा’त गर्ने जेनीले ल’फडा गर्न थालिन् र त’नाव सृजना भएपछि मिडियाले प्रहरी प्रशासनलाई बोलाउनु पर्यो तर प्रहरीलाई मिडियाले नभई आफुले बोलाएको जेनीले बताएकी छिन् । केही नबोलेका नि’र्दोष प्रहरीलाई नानाथरि गा’ली गरेकी जेनीले उल्टै प्रहरीको गल्ति देखाउँदै आफु भने पानि माथिको ओभानो बन्न खोजेकी छिन् ।
उनको साथमा रहेका मा’दक प’दार्थ से’वन गरेका अर्का एक व्यक्तिले आफ्नो साथमा र’ड बोकेर ल्याएको र प्रहरीलाई मा’र्ने भन्दै अगाडी बढेको भिडियोमा प्रष्ट देखिएको छ । आफैले मिडिया बोलाएर जबर्जस्ति उक्त दृश्य खिच्न दवाव दिंदै जेनीले मिडियाकर्मीमाथि समेत अ’पशब्द प्रयोग गरि हा’तपा’त गरिन् । प्रहरीलाई ध’म्क्याँउदै औ’कात भए आफ्नो सामु आउँन पनि उनले भिडियोमा भनेकी छिन् ।
मनोविद् गोपाल ढकालले अहिले चर्चामा रहेकी जेनी कुँवरको बारेमा बोल्दै जेनीलाई मानसिक रो’गीको संज्ञा समेत दिए । त्यस पश्चात जेनीले केही युटुबरहरुलाई बोलाएर मनोविद ढकालले आफुबिरुद्ध लगाएको आ’रोपलाई लिएर ढकाललाई किरा फट्यांग्रा भएको बताएकी छिन् । त्यस्ता झिना मसिना, किरा फट्यांग्राको कुरा सुनेर आफु त्यसको पछि नहिड्ने बताउंदै त्यस्ता कुरामा वास्ता नलाग्ने बताएकी छिन् । तल्लो स्तरको कोहि व्यक्तिसँग पनि आफु नझुक्ने उनको भनाइ छ । उनले ढकाललाई डाक्टरको साथमा आएर आफु रो’गी भएको नभएको चेकजाँच गर्न पनि आग्रह गरेकी छिन् ।
आफुलाई भगवानले खटाएको दावी गरेर सिया नाथ बनेर बसेकी जेनी कतै बिकाश बि’रोधि त होइन ? प्रहरीलाई तथानाम गा’लि गर्ने अनि आफ्नो सम्पति दा’बि गर्दै ज’बर्ज’स्ति मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्ने जेनीको यो ह’र्कतलाई लिएर प्रहरी प्रशासन तथा बिकाश कोष किन मौन छ ? आज पनि युटुबर बोलाएर ज’बर्ज’स्ति ढोका खोल्न र मन्दिर भित्रको दृश्य खिच्न भनेकी छिन् । उनको यस्तै ह’र्कत बारम्बार दोहोरिने हो भने प्रहरी प्रशासन र बिकाश कोषले केही कदम चाल्नु पर्ने देखिएको छ। बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला :